"မစ္စဖစ်ရှာ၏ခေတ်သစ်လူသတ်မှုနက်နဲသောအရာ" ၏အသွင်အပြင်နှင့်အသံ (ဆောင်းပါး ၂ မှဆောင်းပါး ၂) | NAB သတင်းများ | 1 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » မစ္စ "၏မျှော်နှင့်အသံ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery "(ဆောင်းပါး 1 ၏ 2)
Peregrine Fisher ကအဖြစ် Geraldine Hakewell, ထိုကင်မရာများရှေ့တွင်နှင့်သူမ၏အားကစားကားတစ်စီး၏ဘီးနောက်ကွယ်မှအတွက် မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery ။ (အရင်းအမြစ်: ကျွန်တော်တိမ်တိုက် Productions)
တိုင်းတိမ်တိုက် Productions '' မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mysteryခေါင်းစဉ်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, Acorn တီဗီရဲ့ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုဒီဧပြီအပေါ်အမေရိကန် Premiere ခဲ့သည့်သြစတြေးလျရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုပရိယာယ်အလင်းထိတွေ့နှင့်အတူတစ် Ultra-စတိုင်စုံထောက်ပြပွဲနှင့်တစ်ဦး ODE နှစ်ဦးစလုံးသည် "Swing 60s ။ " ဒါဟာ spin- င် ၏ချွတ် အလှမယ် Fisher ကရဲ့လူသတ်မှု Mysteryဒါကြောင့် 2012 အတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးသည့်အခါ 100 နယ်မြေများကျော်အတွက်တင်ဆက်နှင့်သြစတြေးလျရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးတီဗီပို့ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်လာနေတဲ့အဓိကကျသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ hit ဖြစ်လာခဲ့သည်ရာ။ (အဆိုပါစီးရီး PBS အပေါ်အမေရိကန်ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း။ ) ကယ်ရီ Greenwood အားဖြင့်ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံပြီး, အလှမယ် Fisher ကရဲ့လူသတ်မှု Mystery ပြစ်မှုဖြေရှင်းရေးနှင့်နှောင်းပိုင်း-1920s ၏မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်လူမှုရေးမတရားမှု righting, Phryne Fisher က (Essie Davis က), ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်ဖြစ်လာမှသူမ၏အမွေဆက်ခံကံဇာတာကိုသုံးသူတစ်ဦးလွတ်မြောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်မွေဆက်ခံသူတစ်ဝှမ်းဗဟိုပြု။
deb ကော့နှင့် (ကျွန်တော်တိမ်တိုက် Productions တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလည်းအစောပိုင်းကစီးရီးနေသူများကဖန်တီးသောသူ) Fiona Eagger အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထုတ်လုပ်, မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery Geraldine Hakewell Eagger Phryne နယူးဂီနီ၏ကုန်းကျော်ပျောက်ဆုံးတတ်ပြီးနောက်သူမ၏နာမည်ကျော်အဒေါ်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်စည်းစိမ်အမွေအဘယ်သူမူရင်းအလှမယ် Phryne Fisher က၏တူမ "အဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်သူကို Peregrine Fisher သည်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်။ နှစ်ခုတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူးသော်လည်း Peregrine သူမ၏နာမည်ကျော်အဒေါ်အဖြစ်စိတ်သဘောချင်းတူ, လူမှုရေးသတိ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဖက်ရှင်ကိုခစျြ evokes ။ "Peregrine Birdie Birnside အားဖြင့်ကူညီခဲ့, ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်အဖြစ်သူမ၏အဒေါ်၏ခြေရာကိုနင်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ဆုံးဖြတ်သည် အဆိုပါ Adventuresses '' ကလပ် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးသမီးတွေလူ့အဖွဲ့အစည်း) ၏ (ကက်သရင်း McClements), ခေါင်းဆောင်များနှင့်စုံထောက်ဂျိမ်းသောမြင်း (ယောလဂျက်ဆင်) ။ မြင်းရဲ့ချက်ချင်းသာလွန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စစ်ဆေးရေးပါစီ Sparrow (Greg ကျောက်စာ) ကို Adventuresses '' ကလပ်နှင့်အတူအဆက်မပြတ်လေးသာမှုမှာဖွင့်သူတစ်ဦးအကျင့်ပျက်ခြစားမှု, လိင်အရအခွင့်အရေးရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးဖြစ်ပါတယ်။ (Sparrow disparagingly "နည်းနည်းငါး။ " Peregrine ခေါ်ဆို)
မစ္စ Fisher က အလယ်ပိုင်း 1960s မှာ about လေးဆယ်စုနှစ်မူရင်းစီးရီးပြီးနောက်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ Eagger ငါ့ကိုမှ setting ကိုများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရှင်းပြသည်။ အသစ်ကစီးရီးကိုနေချိန်မှာ "ကျွန်တော်တစ်ဦးကမ္ဘာသစ်နှင့်အမျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေး၏ခေတ်သစ်တစ်ခုရှာဖွေစူးစမ်းအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သညျ။ အဆိုပါ 1920s လိုပဲ '' 60s နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်မြေသြဇာကောင်းသောဇာတ်လမ်းကမ္ဘာကြီးပေးပါသည်။ အဆိုပါ 1920s အတွက်မိန်းမတို့အားရရှိအဆိုပါလွတ်လပ်ခွင့်များကိုအကြီးအကျယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောက်ပါပြန်လှည့ ်. , ထိုသို့လူ့အဖွဲ့အစည်းနောက်တဖန်ထဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုတောင်းဆိုဖို့စတင်သော 1960s သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုကာလအကြားသဘာဝ Synergy ရှိပါသည်။ အဆိုပါ 1960s ခေတ်လည်းအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေစတိုင်နှင့်အဓမ္မဖက်ရှင်များအတွက်အလားတူအလားအလာရှိပါတယ် အလှမယ် Fisher က လူသိများသည်။ "
အဆိုပါ 60s ၏နာမတျော၏စကားပြောသော မစ္စ Fisher က'' s ကိုအထီးခဲဂျိမ်းသောမြင်းများစွာသောလူအဆုံးစွန် Swing 60s စီးရီးဖြစ်စဉ်းစားပါသောအရာကိုဖို့ဦးထုပ်တစ်ဦးအစွန်အဖျားအကြံပြု လက်စားချေသူများ, 1961 ထံမှ 1969 ဖို့ဗြိတိန်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်သို့ပွေးလေ၏ရာ။ (Credit: ABC က၎င်း၏နောက်ဆုံးသုံးရာသီများအတွက်အမေရိကန်ပြပွဲတင်သွင်း) ။ လက်စားချေသူများ, ဗြိတိန်ထောက်လှမ်းရေးအေးဂျင့်ယောဟနျသသောမြင်းအဖြစ်ပက်ထရစ် Mcnee ကြယ်ပွင့်ကိုသူတို့မြင်းထက် ပို. ပို. စမတ်မသာခဲ့အတွက်မင်းသမီး Emma ပီးလ် (ဒိုင်ယာနာ Rigg) ကနောက်တော်သို့လိုက်သောမြင်းရဲ့အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, ပထမ Cathy Gale (ဂုဏ်ပြုဘလက်မင်း), ၎င်း၏ပုံဖော်တင်ဆက်အတွက်သဲစီးရီးဖြစ်ခဲ့သည်ရာ (နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးတွေသိပ္ပံဒီဂရီခဲ့), ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအများအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေနှင့်အတူ fisticuffs အတွက်စေ့စပ်သူရှိကြ၏။ (အမြိုးသမီးအဖြစ်ကောင်းစွာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ) ။ Eagger နှစ်ခုစီးရီးများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုအတည်ပြုပြောဆိုသည်။ "စုံထောက်ဂျိမ်းသောမြင်းအမှန်တကယ် 1960 ရဲ့တီဗီစီးရီးတစ်ခုတမင်ကိုးကွယ်ခဲ့ လက်စားချေသူများ"ဟုသူမကပြောတယ်။ "သူကတစ်ဦးပျင်းရိရဲတပ်ဖွဲ့အလယ်၌တစ်ဦးအရည်အချင်းစုံထောက်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကသူ့မကျေနပ်မှုရှိနေသော်လည်းအလုပ်ကြိုးစားသူနှင့်လုံ့လဝိရိယဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြင်းပညတ္တိကျမ်းကြီးကြပ် ပတ်သက်. အကောင်းမြင်ကျန်ရှိသောမှကျူးလွန်နေတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်, တရားမျှတမှု Peregrine ရဲ့တိုက်ပွဲတွေဝိညာဉ်အပျနှံသူတို့ကိုတစ်ဦးအားကြီးသောအဖွဲ့-သောသူတို့သည်အမှုအရာအပေါ်သဘောတူရန်စီမံခန့်ခွဲအခါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စေသည်။ အဆိုပါလိမ္မာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ပျော်စရာနှင့်သောလျှာသည်-In-ပါးဒြပ်စင် လက်စားချေသူများ ကျနော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲငင်အားလုံးရှုထောင့်ရှိကြ၏။ Cathy Gale ရဲ့ဗီရို Birdie Birnside ဘို့ငါတို့ဗီရိုမှုတ်သွင်း။ မင်းသမီး Emma ပီးလ်၏ဇာတ်ကောင်ဒါ delightfully cheeky နှင့် Peregrine အဘို့ကြီးစွာသောထိတွေ့သောကျောက်ခဲ့သည်။ "
အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူရှုထောင့်နှင့်အတူစီးရီးသည်တိုင်းသည်တိမ်တိုက်သော့ချက်ရာထူးအတွက်အလုပ်သမားအမျိုးသမီးအမှတ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီကြောင့်အံ့သြစရာမရှိပါင်; ပထမဦးဆုံးရာသီရဲ့အလေးဖြစ်စဉ်များ၏အမျိုးသမီးသုံးဦးတို့ကညွှန်ကြားခဲ့ကြခြင်းနှင့်စီးရီး '' DP (ဓါတ်ပုံပညာ၏ဒါရိုက်တာ) ကေသီကုန်သည်များသည်။ "ကျွန်တော်တိမ်တိုက်မှာကျနော်တို့အကြောင်းအရာကဦးဆောင်ထုထွင်းထုကောင်းစွာ scripted အမျိုးသမီးပို့ဆောင်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ," Eagger ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တိမ်တိုက်ဒါအမှန်ပင်ကတောက်ပသောအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဆင့်အားကြီးသောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ကအသံပေးရမယ့်တမင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရိတ်သတ်များအတွက်အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့်အကြောင်းအရာများပေးပို့, ရှေ့တွင်အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့်မျက်နှာပြင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏နောက်ကွယ်မှအားကြီးသောထောက်ခံသူခဲ့ကြပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေကောင်း, ထိုပါရမီကီဗင် Carlin ကအားလုံးကိုအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတကယ်ရဲ့တစ်ဦး telemovie [စီးရီး '' ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲ "သေ Beat"] ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်အလွအလုပ်အကိုင်အပြုလေ၏။ "
၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ် DP ကေသီကုန်သည်များ မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery (အရင်းအမြစ်: ကျွန်တော်တိမ်တိုက် Productions)
DP ကေသီကုန်သည်များအသက်ရှင်တော်မူသည်နှင့်မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ "ကျွန်မတစ်ချိန်ချိန်မှာနောက်ဆုံးရာစုရုပ်ရှင်ကျောင်းပြီးသွားကတည်းကဒီမှာရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်," ကုန်သည်များငါ့အားပြောဆို၏။ "ငါသည်ဤအရပ်၌မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ကားတခုတခုအပေါ်မှာအော်ပရေတာထို့နောက်ထို့နောက်အာရုံ puller အဖြစ်တစ်ဆန် loader မှအဖြစ်ပထမဦးဆုံး, ငါ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘဝကိုစတင်ခဲ့နှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်မအပါအဝင်တီဗီရှိုးအပေါ်ဒုတိယယူနစ်အလုပ် gravitated ကြှနျုပျတို့ကို၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝ, စီးတီးလူသတ်မှုနှင့် Wentworth။ 2015 ၌ငါ DP အပေါ်အဖြစ်လွှဲပြောင်းယူ Wentworth။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်စီးရီးရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးခဲ့ကြရတယ်။ "
ငါမူရင်းလိုပဲထင်ကုန်သည်များပြောသည် အလှမယ် Fisher က စီးရီး, မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery စံရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဆန့်ကျင်အဖြစ်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရှိပါတယ်, သူကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ပုံကိုမေးတယ်။ "ဒါဟာပြောသင်တို့တွင်အလွန်ကြင်နာမယ့် မစ္စ Fisher က တစ်ဦးရှိပါတယ် '' ရုပ်ရှင်ကြည့်, '' ကုန်သည်များတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "ငါသည်သင်တို့ကိုဒါထင်တယ်ဝမ်းသာတယ်, ဒါကြောင့် Fiona ဘဏ်များ, ပြပွဲဘို့ငါတို့ Set-up ညွှန်ကြားရေးမှူးမည်။ ငါကချိန်ခွင်လျှာတဲ့ကိစ္စရဲ့ပုံပါဘဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ဒီမှာနေတဲ့တီဗီအချိန်ဇယားပေါ်မှာရုပ်ရှင်တဦးတည်းမဟုတ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာခြေရာခံ၏ '' တစ်ဦး 100 တင်. '' ဟုပြော '' နှင့် Dolly က၎င်း၏အလုပ်ပြုစေပုံကိုမကြာခဏအကြောင်းကိုလက်တွေ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောပြပွဲအပေါ်လိုအပ်လွှမ်းခြုံအများကြီးရှိပါတယ် မစ္စ Fisher က။ သူတို့ကဒီကဲ့သို့ပြပွဲ၏ဟာသ rhythms နှင့်အတူကစားနေသည့်အခါအဆိုပါဒါရိုက်တာများနှင့်အယ်ဒီတာများရွေးချယ်စရာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ရုံစာမျက်နှာအရေအတွက်ကတဆင့်ရရနှစျခုကင်မရာများအသုံးပြုနေသည်, ထိုသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အချို့သောရက်ဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဤရွေ့ကား, သင်၏ 100 '' လမ်းကြောင်းရက်ပေါင်းမဟုတ်! တီဗီထဲမှာအများဆုံးသောအရာတို့ကိုလိုပဲ, တကပူးပေါင်းပါပဲ။ Pre-ထုတ်လုပ်မှု, ဒါရိုက်တာ, ပထမဦးဆုံးအေဒီ၌၎င်း, ကျနော်တို့အချိန်ဇယားထဲမှာနည်းနည်းပိုပြီးထောက်ထားညှာထာသောဖြစ်တတ်နိုင်, ပြီးတော့သူကသူတို့အားအဖိုးတန်အချိန်လေးသို့သလောက် filmic အကြောင်းအရာ Stuff ငါ့အလုပ်ရဲ့ဘယ်မှာမှထွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါဟာနီးပါးအမြဲတမ်းပိုမိုရှုပ်ထွေးပစ္စည်းအပိုအချိန်နှင့်ထို့ကြောင့်ပိုမို filmic ချဉ်းကပ်ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းတိုက်ဆိုင်။ ငါကဒီမှာကူညီပေးသည် features တွေ၌ငါ့အစောပိုင်းနှစ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ငါသည်ငါ့မိခင်ဘာသာစကား '' filmic '' သည်ထင်နှင့်ယခုငါရုပ်မြင်သံကြား၏အမြန်နှုန်းရှိသည်။ ဒါဟာငါထင်, တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသော combo ပါပဲ။ "
အဲဒီနောက်သူမအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရဲ့အခြားအစီးရီးဆန့်ကျင်အတိုင်းဤစီးရီးမှထူးခြားသောသောရုပ်ရှင်ပညာများအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုခဲ့ကြသည်သောအရာကိုကုန်သည်များကိုမေးခဲ့တယ်။ "အကြားအခြို့သောမျှမျှတတကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးကွဲပြားမှုရှိ မစ္စ Fisher က နှင့်ရာသီခုနစ်ခဲ့သည့်ကိုယ့်ပြီးစီးခဲ့သောအလုပ်, Wentworth. Wentworth သော်လည်း, အစုတခုအပေါ်နီးပါးလုံးဝပစ်ခတ်နေသည် မစ္စ Fisher က အစစ်အမှန်နေရာလုနီးပါးလုံးဝသေနတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဆိုပါ Adventuresses '' ကလပ်တစ်ခုအမွေအနှစ်စာရင်းအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ပြန်ပြုပြင် 60s အိမ်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ။ ဤတည်နေရာနှင့်အတူအဓိကစိန်ခေါ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နေ့တာအတွင်းညဥ့်အချိန်အတွင်းပိုင်းရိုက်ကူးခွင့်ပြုပါရန်ပေူကိုကတ္တီပါကဲ့သို့အဘုံအလုပ်အကိုင်များလုပ်ဖို့ကြာကာလဖြစ်၏။ အဆိုပါ Adventuresses '' ကလပ်မှာကြီးမားတဲ့ပြတင်းပေါက်ကြောင့်ပြတင်းပေါက်ပတ်လည်အင်္ဂတေနုမှအထူးသဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကတ္တီပါလုံခြုံရေးသောအခါအယူစောင့်ရှောက်မှုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာသေချာအဲဒီနေရာလာမယ့်အချိန်ကိုပြန်ခွင့်ပြုထားပါသည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွင့်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအရမ်းအလေးအနက်ထားဒီတာဝန်ယူပါ။
"ငါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု 1964 မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် 2018 မဲလ်ဘုန်းမြို့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ပုံပါဘဲ။ Pre-ထုတ်လုပ်မှုများတွင်ရှိသို့မဟုတ် screen ပေါ်မှာမြင်စေနိုင်ဘူးနိုင်ဘယ်သို့သောအကြောင်းရှည်လျားသောဆွေးနွေးချက်များ, ခဲ့ကြသည်ယျသို့မဟုတ်မဟုတ်ခဲ့ '' ကာလ၏။ '' ဒါဟာသင်ရုံအပြင်ဘက် pop နှင့်တစ်နေ့အပြင်ပန်းမပွုနိုငျဆိုလိုသည်။ အရာအားလုံးထုတ်လုပ်မှု၏ဒီ type များအတွက်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာဘင် Bangay နဲ့သူ့အဖွဲ့ခေတ်သစ်ရှုခင်းထွက်ပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုနိုင် '' အမှုအရာ '' ထောက်ပံ့တဲ့စိတ်ကူးအလုပ်အကိုင်ကိုပြု၏။ ကားများ, ကုန်တင်ကားများနှင့်အတုအုတ်နံရံများကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကို! "
ယင်းစီးရီး '' 60s setting ကို၏စကားပြောသော မစ္စ Fisher က ကုန်သည်များနှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည် 60s ၏ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဆိုပါကကျွန်မစပ်စုခဲ့သောကာလ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုဖမ်းယူ၏ထိုကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအလုပ်ပါပဲ။ "ဒါဟာရယ်စရာအရာပါပဲဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမစ္စ Fisher ကအပေါ်ခေတ်သစ်ယူဘို့ကိုကိုးကားရှာနေစတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကတီဗီနှင့် 60 ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေလာလိမ့်မယ်စိတ်ကူး။ ကျနော်တို့အမှုအရာမှတဆင့် trawling စတင်ပြီးတာနဲ့သော်လည်းဘာမျှတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုမှာထွက်ခုန်တက်။ ဒါဟာအလျင်အမြန်ဖက်ရှင်နှင့်ဗိသုကာစတိုင်အဆုံးအဖြတ်ခဲ့ Fiona ဘဏ်များနှင့်ငါအသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "ကုန်သည်များထို့နောက်တစ်ဦးမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အဖြစ်ကဆက်ပြောသည်" ။ သူကကျွန်တော်အစား 60 ရဲ့လုပ်ဘာမှမှမဆိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ညွှန်းထက်ကြောင်းတပြင်လုံးကိုကာလမှာနောက်ကျောကိုကြည့်ဘယ်လောက်တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအလင်းနှင့်တောက်ပ-နီးပါးဖြစ်လိုကျနော်တို့အချိန်နောင်တမရစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည် စမတ် get နှင့် လက်စားချေသူများ"
ကုန်သည်များလည်းသူမ၏အဖွဲ့သည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သို့သွားကြဖို့အချိန်ကိုယူ။ "ကျနော်တို့ကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် မစ္စ Fisher က အဆိုပါ Arri Alexa ကင်မရာများကိုစနစ်အပေါ်မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Panavision အားဖြင့်ထောက်ပံ့။ အဆိုပါကိရိယာအစုံဟာ Ronin အပေါ်နီးပါးသီးသန့်ကြွင်းရာနှစ်ခု Alexa XTs နှင့်တစ် Alexa mini ကိုပါရှိသော။ ကျနော်တို့ 2K 444 အတွက်ပစ်သတ်။ အဆိုပါကိရိယာအစုံကိုလည်း 24-275 zoom ကိုအပါအဝင် Panavision Primo မှန်ဘီလူးတစ်စိတ်ကူးထားသည်ကျယ်ပြန့်ကောင်းကင်တမန်သည် 19-90mm zoom ကိုပါရှိသောနှင့် Primo အစုတခုဟာ 14mm ထံမှ 150mm မှတဆင့်အထိ primes ။ "
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကုန်သည်များအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တစ်ဦးကိုယခင်ကအထီးကြီးစိုးစက်မှုလုပ်ငန်း "ဒါဟာအမှန်တကယ်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကင်မရာနောက်ကွယ်မှအလုပ်လုပ်နေသောပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေကြည့်ဖို့အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်အတွက်ရာ၌ခန့်ထားပြီမကြာသေးခင်ကတိုးတက်မှုအပေါ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ယူပူဇော်ကြ၏။ ငါမတူကွဲပြားမှု, အားလုံး၎င်း၏အသွင်သာအသက်တာတွင်အကောင်းတစ်ဦးအရာလို့ထင်ပါတယ်။ မစ္စ Fisher က ပြောင်းလဲနေသောရှုခင်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပွဲတွင်ကျနော်တို့အမျိုးသမီး HODs [ဌာနမှူး] ကဝိုင်းကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လေ၏။ "
2015 ABC ရုပ်သံ acorn တီဗီ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး တည်းဖြတ်ခြင်း တိုင်းတိမ်တိုက် Productions FOR-တစ်ဦးက ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို အလှမယ် Fisher ကရဲ့လူသတ်မှု Mystery မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery ဆူညံသံလျော့ချခြင်း PBS လှံ & Arrows သေစားသေစေသော (တီဗီစီးရီး) ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် မူကွဲစနစ်များ viarte Warsaw ကို 2019-06-24
ယခင်: Paid ထုတ်လုပ်မှု International
နောက်တစ်ခု: Paid ထုတ်လုပ်မှု International